နေအိမ် » ရိုက်သံ & active » Mastercam X20.0.19466.0 Download
အားဖြင့် Anastasiya Libra | ဇန္နဝါရီလ 24, 2018
Mastercam X20.0.19466.0 အပြည့်အဝ Crack 2017 အခမဲ့ download ကွန်ပျူတာ-ကိုကူညီခဲ့ဒီဇိုင်းများအောင်အတွက်အသုံးပြုအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. တွင် 1983 ဒီဆော့ဗ်ဝဲ CAD ကုမ္ပဏီကတီထွင်ခဲ့. Mastercam X20.0.19466.0 အပြည့်အဝ Crack စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အဆောက်အဦများအားလုံးကိုအစီအစဉ်များရှိသည်သော CAD နေဖြင့်ပထမဦးဆုံးဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်. ကနဦး, ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုသာ 2D အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အချိန်ကိုကြိုတင်နှင့်ဝသကဲ့သို့ 2017 ကအများကြီးဖွံ့ဖြိုးပြီး 3D ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြစ်လာခဲ့သည်. ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများ Mastercam X20.0.19466.0 Crack ဆော့ဖျဝဲကိုအသုံးပြုပြီးအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြဘို့တောင်မှဒီဇိုင်း. Mastercam activation key ကို 2017 လျှောက်လွှာပုံပါဝင်တဲ့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထား tool ကိုလမ်းကြောင်းအပေါငျးတို့သလိုအပ်သောအစုံရှိပါတယ်, စူး, သင်ကြားခြင်း, အိတ်, မျက်နှာ, ခွံကြိတ်, ထွင်းထု, မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်မြန်နှုန်း, အဆင့်မြင့် multiaxis, ပြီးအများကြီးပို. Mastercam အက်ကွဲ tools တွေကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့လုံးဝစက်တွေ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်ဖို့မောင်းနှင်မှုကို enable. Mastercam X20.0.19466.0 အပြည့်အဝ Crack အသုံးပြုသူများသည်အများအပြား supply စက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအဓိပ္ပာယ်များထဲမှ အသုံးပြု. အပိုင်းပိုင်းထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်. အသုံးပြုသူများလည်းမိမိတို့၏စိတ်ကြိုက်အဓိပ္ပာယ်ထုတ်လုပ်ဖို့ Mastercam ရဲ့အဆင့်မြင့် tools တွေကိုသုံးနိုငျ. နောက်ဆုံးရ Mastercam x10.2 အသုံးပြုသူများကသူတို့ဒီဇိုင်းကပိုထိရောက်စေရန်အဘို့အမျိုးစုံအဆောက်အဦများ.
Mastercam ရဲ့ X20.0.19466.0 အမှတ်စဉ်သော့ချက်လည်းသည် CAM ၏ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာကပါဝင်ပတ်သက် (ကွန်ပျူတာ-ကိုကူညီခဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှု). သည် CAM ယနေ့နောက်ဆုံးပေါ်စက် tool ကိုထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာလည်းပါဝင်သည်. တစ်ပြိုင်တည်းကိုးကွယ်ချေ အဟောင်းသက်တမ်းမာစတာ cam ဘုရားရဲ့အားဖြင့်မနေ့ကရဲ့စက် tool ကိုထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ, သော tracer တစ်ဦးနည်းစနစ် automated စက်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကိုင်တွယ်ရန် tool.Best အရာနောက်တော်သို့လိုက်သောပထမဦးဆုံး cam သို့မဟုတ်မော်ဒယ်ရည်ညွှန်းသည်အသုံးပြုသူများထိထိရောက်ရောက်နှစ်ဦးစလုံးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တဦးတည်းဆော့ဖျဝဲအသုံးချနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်, ဥပမာ,, သည် CAM နှင့် CAD. အဘယ်သူမျှမခဲယဉ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကြောင့်လုပ်ကိုင်ရန်လျှောက်ထားခံရဖို့ရှိသည် software ကိုသုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ဒါဟာင်.
တိုးတက်လာသော tool ကိုလမ်းကြောင်း
အပြည့်အဝအားလုံးအသစ်က tools တွေကိုထိန်းချုပ်နှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူ
လျင်မြန်စွာအားလုံး 2D မော်ဒယ်များအတည်ပြုရန်နိုင်သလား
အားလုံးယခင် bug တွေကို fix နိုင်နှင့်ဖြစ်ပါသည်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကာကွယ်ပေးဆော့ဖျဝဲ
အဆိုပါပြီးသားချောမွေ့နှင့်အကျိုးရှိစွာဆိပ်ကမ်းကျွမ်းကျင်သူရွေ့လျားမှုမွမ်းမံရန်ဆိပ်ကမ်းကျွမ်းကျင်ဘို့နယူး minimize tilt option ကို.
2: D high-speed ပီးလ်စက် X20.0.19466.0 အတွက်တစ်ကျော့ပြန်စေသည်.
Multiaxis tool ကိုလမ်းကြောင်းဂရပ်ဖစ် window တွင်အစား virus သယ်ဆောင်၏ပုံမှန်အတိုင်း tool ကိုရွေ့လျားမှုအဖြစ်ပြသထားပါသည်.
Thread စက်နှင့် Barrel tool ကိုထောက်ခံမှု features တွေအတွက် Mastercam X20.0.19466.0 အပြည့်အဝ Crack ထည့်သွင်းခဲ့ကြ.
2: D HST Blend အသစ်တစ်ခုကိုဖြတ်အမိန့်များပါဝင်သည်. ဗဟိုမှသို့မဟုတ်ဗဟိုကနေအပြင်ဘက်မှယခုပြင်ပကနေစက်ဤလျှောက်လွှာနိုင်ပါတယ်သုံးပြီးအသုံးပြုသူများ.
နယူး HD ကိုရလဒ်များကိုကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြ
Air ကိုရွေ့လျားမှု feature ကိုလည်းပါဝင်သည်
3: D ကြမ်းတမ်းကိုလည်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
How to Download Mastercam X20.0.19466.0 Full Crack + သော့
Mastercam X20.0.19466.0 ပေးသောခလုတ်မှအက်ကွဲနှင့်အတူ Download
ဆက်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းခြင်းများနှင့် Mastercam-key.txt အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ပရီမီယံ key ကိုအသုံးပြုဖို့
သင်ပြုသောအနေ! Mastercam X20.0.19466.0 ဗားရှင်းအပြည့်အဝ features တွေပျော်မွေ့ 2018.
← Ashampoo Burning Studio က 19.0.0.25 ရိုက်သံ Hotspot Shield ကို VPN ကို Elite 7.20.8 ရိုက်သံ →